Al Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada Dilka Marxuum Hagafeey iyo kuwa kale | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Wararka Maanta / Al Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada Dilka Marxuum Hagafeey iyo kuwa kale
Al Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada Dilka Marxuum Hagafeey iyo kuwa kale
Bayaan ka soo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegtay mas’uuliyada Weerar qorsheysnaa oo maanta lagu Dilay Afhayeenkii hore ee Maamulka Ximin iyo Xeeb, Maxamed Cumar Xagafeey.
Qoraalka Al Shabaab ayaa sidoo kale lagu xusay in Maxuum Xagafeey lagu khaarajiyay Isgooyska Digfeer ee Magaalada Muqdisho, kadib markii Xubno ka mid ah Xoogaga Al Shabaab oo la socday Gaari nuuca raaxada ay rasaas ku huwiyeen Gaari kale uu watay Afhayeenkii hore ee Maamulka Ximin iyo Xeeb .
Xarakada Al Shabaab ayaa dhinaca kale waxey dhabarka u ridatay mas’uuliyada Weerar kale oo ka dhacay Degmada Xamar-Jajab, kaasi oo lagu dhaawacay Taliye ku xigeenkii hore ee Nabad Sugida, Xasan Maxamed Cali ( Xasan Dheere) iyo labo kale oo Askar ah.
Dhinaca kale, Taliska Hay’adda Nabad Sugida Qaranka Soomaaliyeed ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in Ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen Gaari ay la socdeen Dabley hubeysan oo tiro ahaan gaareysa 4.
Dableydan ayaa lagu qabtay Xaafada Jamhuuriya ee Degmada Kaaraan, waxaana Taliska Nabad Sugida ay ku sheegeen Raggan in ay yihiin kuwii ka dambeeyay Weerarkii lagu Dilay Afhayeenkii hore ee Maamulka Ximin iyo Xeeb, Maxamed Cumar Xagafeey.
Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo kordhayay Dilalka qorsheysan ee lagu beegsanayo Odayaal Dhaqameedyada, Ergadii Xildhibaanada ku soo doortay Xarumaha Maamul Goboleedyada iyo Saraakiisha ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.